8-da kulan ee ugu wanaagsan ee dharka loogu talagalay Android | Androidsis
Dukaanka Play-ka waxaa ku yaal ciyaaro aan la tirin karin oo nooc walba leh, oo isugu jira wiilal iyo gabdho, iyo sidoo kale kuwa waaweyn. Mid ka mid ah qaybaha ugu caansan waa inuu ku xirnaado ciyaaraha labbiska, waana taas sababta aan hadda kuugu keenayno qoraalkan.
Isku-dubbaridkan ayaan ku soo qori doonnaa oo ku sifeyn doonnaa Ciyaaraha dharka ugu fiican ee loogu talagalay Android, kuwaas oo loogu talagalay inta badan gabdhaha iyo gabdhaha. Dhamaan ciyaaraha aad hoosta ka heli doontid waa bilaash, waxaa xusid mudan, sidoo kale ka mid noqoshada kuwa ugu caansan oo laga soo dejiyey qeybtooda.
1 Chibi Dolls - Abuuraha Avatar
2 Ciyaaraha Dharka ee Bilaashka ah
3 Candylocks Saloon Timaha - Qaabka Timaha Nacnaca Cotton
4 Fluvsies - La korsado xayawaannada la jecel yahay ee jilicsan
5 Dukaan waali ah oo lala helay Gabdho taajir ah - Ciyaarta Fashion-ka
6 Salon Timaha Xayawaanka ee Jungle 2 - Salon Beauty
7 Dharka Dharka: Ciyaarta Dharka
8 Sheekada Hollywood: Icon Fashion
Chibi Dolls - Abuuraha Avatar
Ma jiro hab ka fiican oo lagu bilaabi karo isku-dubbaridkan mid ka mid ah kuwa ugu soo dejisan uguna caansan ciyaaraha labbiska gabdhaha ee Google Play Store for Android Waana taas in Chibi Dolls - Avatar Abuuraha uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran qaybtiisa, inuu mid ahaado wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku habboonaado dabeecadda aad dooratay gabi ahaanba dhar kasta iyo qalab la qiyaasi karo.
Waxaad ka dooran kartaa dhinacyo badan oo jireed oo dabeecadda ah, oo ka bilaabmaya timo ilaa maqaarka iyo midabka indhaha, si aad uga dhigto inuu u eg yahay adiga ama qof kale. Intaa waxaa dheer, afka iyo sunnayaasha sidoo kale waa la habeyn karaa.
Tafaariiqleyda, waxaa sidoo kale macquul ah in lagu daro dhibco polka ah, dooro midabka indhaha, ku dar cirridka dhabannada iyo faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan muuqaalada wajiga. Waxa kale oo jira lacago aad u tiro badan oo la kala dooran karo, iyo sidoo kale jilayaasha waxaa laga dhigi karaa avatars anime.
Astaamaha kale ee ciyaarta labiskaan waxaa ka mid ah xayawaanka rabaayadda ah ee loo yaqaan 'avatar', kabo tiro badan oo leh qaabab kala duwan iyo hababka niyadda u ah. Ugu dambeyntiina, waxaad dooran kartaa avatars-kaaga si aad ugu soo geliso shabakadaha bulshada iyo warbaahinta kale, ama aad ula wadaagto iyaga sidoo kale.
Chibi Dolls - Abuur Avatar
Developer: Ciyaaraha Dharka Anime
Ciyaaraha Dharka ee Bilaashka ah
Ciyaaraha Fashion-ka Bilaashka ah waa mid kale oo aad u xiiso badan oo la yimaada shaqooyin badan iyo xulashooyin si aad u curyaamiso curcurkaaga. In ka badan 1.000 dharka, dharka, qalabka iyo waxyaabo kale oo badan, waxaad sameyn kartaa wax kasta oo aad uga dhigi karto avatar-kaaga inuu qaato qaabkaaga iyo muuqaalkaaga qaab raad raac ah, si aad ugu shubi karto shabakadahaaga bulshada sawir sawir ah oo aad ula wadaagi karto asxaabtaada, qoyskaaga iyo dadka aad taqaan.
Waa mid ka mid ah cayaaraha ugu xiisaha badan ee loogu talagalay dadka jecel moodada, maaddaama ay leedahay xulashooyin u gaar ah oo aan dhammaad lahayn oo ay ka mid yihiin xulashada dharka, dharka iyo dharka guud ahaan, iyo sidoo kale qalab iyo waxyaabo kale oo dheeri ah. Dabcan, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad kala doorato astaamaha jirka si caruusadaadu u qaabeyso qaabka iyo muuqaalka aad rabto.
Kaliya maahan inaad labisato oo aad astaysto dabeecadaada sidaad rabto, laakiin waad awoodaa Waxa kale oo aad noqon kartaa naqshadeeye moodada oo aad ka dooran kartaa qalabka sida dahabka qaaliga ah iyo kuwa qaaliga ah, boorsooyinka, boorsooyinka, garbasarooyinka, garbasaarta iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay kaloo leedahay munaasabado badan oo aad ugu labbisan karto boombaladaada, sida arooska, qalin jabinta, munaasabada gala iyo waxyaabo kale oo badan.
Developer: Labbiska Is-beddelka Gabdhaha Ciyaaraha
Candylocks Saloon Timaha - Qaabka Timaha Nacnaca Cotton
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin inaad labbisato oo aad u qaabeyso avatar kartoon ah, cayaartan adiga ayaa loogu talagalay. Waxaad awoodi doontaa inaad u labbisato sida aad rabto oo aad u siiso caruusaddaada kartoonka ah muuqaalka tiro aad u tiro badan oo dhar iyo agab ah oo diyaar u ah inay doortaan oo ay u dhigaan sidii ay u eegi lahayd sidaad u malaynayso.
Dharka lagu heli karo buugga gudaha ee labbiskaan ayaa ah kuwa ugu shukaansiga badan. Halkan waxaad sidoo kale ka heli kartaa noocyo kala duwan oo kabo ah ... xitaa mootooyinka! Iyo in lagaa dhigo mid nool ama firfircoon, waxay bixisaa caqabado toddobaadle ah oo ka kooban labbiska caruusaddaada sida lagu muujiyey loolanka kala duwan, kaas oo aad ku heli doontid abaalmarinno ciyaarta dhexdeeda ah oo aad u adeegsan karto si aad u sii hagaajiso dabeecaddaada.
Waxaad kala dooran kartaa shan dabeecadood oo dumar ah oo kala duwan; waxaad leedahay dhalasho Kate, Kiwi Kara, Betty Berry, Cotton Sandy iyo Uni Cami. Dhammaantood way ka duwan yihiin oo waxay leeyihiin dabeecad jacayl aan cid kale lahayn. Intaa waxaa dheer, mid waliba wuxuu la yimaadaa qaab asal ah oo aad u beddeli karto sidaad u jeceshahay.
Kaliya ma awoodi doontid inaad la soo baxdid dareenkaaga fashionista ee ciyaartaan, laakiin sidoo kale Waxa kale oo aad soo bandhigi kartaa xirfadahaaga iyo xirfadaha timo jarista maadaama aad nashqadeyn karto jarista iyo timaha aad rabto inta badan si caruusadahaadu ugu kala duwanaadaan munaasabad kasta, oo leh boqolaal timo oo la heli karo oo aad si xor ah wax uga beddeli karto. Waxaad sidoo kale sameysan kartaa jilayaashaada sidaad doonto, si muuqaalkooda oo dhami u waafajiyo sidaad u maleynayso.
Candylocks Salon Timaha - Qaabka Timaha Nacnaca Cotton
Fluvsies - La korsado xayawaannada la jecel yahay ee jilicsan
Haa runtii waa ciyaar xayawaan, laakiin waxa xiisaha leh ee ku saabsan kan ayaa ah in, marka lagu daro daryeelidooda iyo korintooda, waad u labisan kartaa si waafaqsan dookhaaga maxaa yeelay waxay leedahay qol mooddo. U labbis iyaga si qurux badan leh tanooyin dhar ah iyo dhar aad kala dooran karto, kuna dar qalabyo badan si aad xayawaankaaga xayawaanku ugu muuqdaan kuwo xarago leh oo had iyo jeer diyaar u ah munaasabad kasta.
Waxyaabaha kale, Fluvsies sidoo kale waxay la imaataa Kafeega xayawaanka rabaayadda ah; soo ogow meelo badan oo aad ku qaadan karto xayawaankaaga aad ku kari kartid daraasiin ka mid ah cuntooyinka dhadhan fiican leh. Fur cuntada cusub sida aad u kariso una diyaarso suxuunta ugu fiican ee xayawaankaaga raba.
Dhanka kale, ku raaxeyso astaamaha yar yar ee aad ka heli karto ciyaartan oo aad ku sameyn karto xayawaannadaada. Si wanaagsan u daryeelo, quudin oo la wadaag si ay ugu raaxaystaan ​​inta ay korayaan.
Ciyaartaan waxaad ku buuxin kartaa riyadaada inaad tahay gabar milyaneer ah. Waana inay haysataa lacag ku filan ciyaarta si ay u fuliso wax kasta oo la doonayo, laakiin ha ku jahwareerin! Wax ka iibsiga waalida ee gabdhaha hodanka ahi ma taageerto bixinta lacagta dhabta ah. Wax walba waxaa lagu maareeyaa ciyaarta gudaheeda, waxaana jira waxyaabo badan oo lagu qarash gareeyo. Ciyaarta gabi ahaanba waa bilaash!
Hel, dooro oo soo iibso tiro aan xadidnayn oo dhar ah, dhar, agabyo iyo waxyaabo kale oo badan si aad ugu labisato 6da gabdhood ee ciyaarta laga heli karo, dhammaantood midba midka kale wuu ka duwan yahay, midabbada maqaarka iyo muuqaalka oo aad wax ka beddeli karto wax kasta oo aad ku iibsan karto si ay kuugu ekaadaan ama u ekaadaan milyaneerka caanka ah ee aad ku riyootay inuu noqdo.
Ciyaartaan dukaamaysiga qasabka ah dhibaato ma ahan, kharash aad uga yar timo jareyaasha qaaliga ah. Waxaad haysataa lacag aad kubixiso sida berrito mooyee!
Shopping Fashion - Ciyaaraha Gabdhaha
Salon Timaha Xayawaanka ee Jungle 2 - Salon Beauty
Tani waa ciyaar kale oo lebiska aan diiradda saareynin dadka avatar, laakiin xayawaanka. Waxaad heli kartaa afar xayawaan oo qurux badan oo qurux badan oo diyaar u ah inay kuu ahaadaan meesha aad gacanta ku hayso si aad u aragto iyaga oo ka dhigi kara sida aad doorbideyso.
Waxaad leedahay maroodiga Saarah, oo jecel xeebta iyo wax kasta oo ku lug leh; Mona Maya, oo jecel hawdka waana caqabad in laga dhigo marwalba mid quruxsan maxaa yeelay waa mid aad u xun; ku socota zebra Gizelle, oo ah kan ugu shukaansiga badan, sababtoo ah inuu yahay kan had iyo jeer diyaar u ah inuu isku dayo dhar cusub iyo dhar qurux badan; shabeelka Amy, oo ku jecel jacaylka qurxinta iyo timo qurxinta caadiga ah; iyo toucan casaan ah, kuwa ugu qalaad oo dhan.
Dharka Dharka: Ciyaarta Dharka
Xaqiiqda ah in ciyaartaan labbiska ay ku jirto boosaskii ugu dambeeyay macnaheedu maahan inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu ciyaarta yar uguna caansan noocyadeeda. Waxay leedahay in kabadan 10 milyan oo soo degsasho ah oo cadeynaysa, iyo waliba kudhowaad 750 kun oo faallooyin iyo qiimeyn ah oo siineysa qiimeyn 4-xidig wanaagsan Google Play Store.
Ciyaartan waxaad awoodi doontaa inaad fuliso riyadaada moodada fashionista. Ku labbisto caruusadahaaga dharka iyo dharka noocyada caanka ah sida Calvin Klein, Vince Camuto iyo Rachel Zoe, oo ka dhig kuwo aan weligood hore u dhicin. Waxyaabaha kugu dhiirrigelin doona inaad istaagto oo aad ka dhex doorato dharka ugu fiican ayaa ah caqabadaha gudaha ee ciyaarta, taas oo aad ka heli doontid sawirro, dhacdooyin darajo iyo rooggag cas, sida haddii aad ahayd qof caan ah. Halkaas waa inaad ka iftiimataa!
Maheli doontid kaliya dharka xiisaha leh, laakiin sidoo kale Dharka xad-dhaafka ah iyo kaabayaasha aad isku dari karto si aad u siiso caruusaddaada muuqaalka riyadaada. Qodob kale oo weyn oo ku habboon ciyaartaani waa in dhammaan dharka iyo qalabka aad ka hesho buugga ciyaarta laga heli karo nolosha dhabta ah; xisaabi xiriiriyeyaasha websaydhada aad wax ka fiirsan karto ka dibna dalban karto oo aad u iibsan kartid qolkaaga nolosha dhabta ah.
Hollywood Story waa ciyaarta labbiska ee loogu talagalay Android taas oo aad ku kalsoonaan karto naftaada inaad tahay xiddig adduunka iyo warshadaha ugu weyn adduunka ee filimka, oo xira dhar aad u qurux badan iyo dhar si aad ugu ekaato sida ugu fiican uguna qurxoon rooga cas.
Ka dooro qalab badan, dhar kala duwan iyo waxyaabo kale oo badan si aad uga mid noqotid waxyaabaha ugu ifaya dhacdooyinka gala iyo abtirsiinta. Sidoo kale waxaad u habeyn kartaa avatar-kaaga inuu kuu ekaado adiga ama xiddigta filimka ee aad u bogaadiso. Beddel midabka maqaarka iyo muuqaalka jirka oo leh ikhtiyaarro habayn kala duwan ah. Sidoo kale booqo magaalooyinka iyo meelaha aan ahayn Hollywood, sida Beverly Hills, Las Vegas iyo Manhattan, oo noqo xarunta dareenka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 8-da kulan ee ugu fiican dharka labiska ee Android
7da barnaamij ee arooska ugu wanaagsan Android